Warbixin lagu shegay inay magaaloyin katirsan puntland kafaa’ideen burcad badeeda. | Anti-Tribalism
← Beesha Gabooye waxa ay diyaar u tahay Dhib iyo Dheefba wixii ka soo baxa shirka Khaatumo2
Somaliland Societies in Europe →
Warbixin lagu shegay inay magaaloyin katirsan puntland kafaa’ideen burcad badeeda.
WARBIXIN – warbixin iyo daraasaad lasemeeyey ayaa lagu sheegay in burcad badeeda soomaaliya ay u hor seedeen qaybo ka mid ah dalka soomaaliya hormar balaaran oo dhanka dhaqaalaha ah, sida ayshegtay hay’ada British think-tank Chatham House, oo faah faahinteeda waxa ay inta badan la socdey sawiro dhanka artin ah.
Dhaqaalaha burcad badeeda ayaa waxa lasheegay in magaalooyinka waweyn ee gobolada ,magaaloyinkaasi oo lagu sameeyay maal galin xoogan,oo ah lacag ka timid burcad badeed sida ku cad daraasadani cusub.
Anja Shortland oo haweenayda qortay warbixinta ayaa waxa ay isticmaashay sawiro satalaayd uu heerkiisu sareeyo ahna kan la adegsado maalinkii iyo satalaydka wax sawira xiliga habenkii.
Waxana baritaanka waday ilaa iyo laga soo bilaabo 2000, Sawirka dhanka lagu qaaday satarlayt goor habeenkii ayaa muujinaya in si’aad ah ay sare u kaceen nalalka xiliga xiliga habeenkii ka shidan magaalooyinka sida darasaaadka lagu sameeyey.
Waxana kamid ah magaaloyinka Boosaaso garowe cadaado oo intooda badan burcada lagu arko si’aad ah kana tirsan maamul goboleedka Putlan halkaasi oo inta badan saldhig u ah kooxaha burcad badeeda.
Sawirada ayaa muujinaysa daraasadu leedahay in uu batay isticmaalka korantada sababtuna ay tahay hormarka dhanka dhaqaalaha ee yimid burcad, waxa Daraasada cusub ee ku saabsan dhaqalaha ay soo kordhiyeen burcad badeed ayaa sidoo kale farta ku fiiqaysa in isticmaalka nalalka iyo korontada ku sii kordhaya Boosaaso iyo Garawe.
Sawirada dhanka satalaytka ee laqaaday maalinkii ayaa sida daraasada ku cad waxa aymuujinayaan in laga soo bilaabo 2002-dii ilaa iyo 2009-kii , ay si’aad ah u kordheen dhismaha cusub, ee laga dhisayo magaalada Garawe iyo waliba hormar balaaran oo dhanka ganacsiga ah oo ka taaba galay magaaladaasi.
Warbixinta waxa ay inta kudartay inay dhismooyin badan ay ka socdeen ilaa xiligaasi magaalada Garawe markaana banaanka dhismaha ay ku baakin garaysan yahiin,gawaari aad u tira badan taasi oo muujinaysa dhaqalaha meesha yaala.
Waxa darasaadka aysooqada tay degmoyinja cadaado, Hobyo, ayl oo sida la sheego xarun u ah burcada badeeda oo anan wax horumar ah uga siimuuqan sida daraasada ku cad.
Hay’ada British think-tank Chatham House, ayaa muujinaysa in lacagta madax furashada ah ee ay burcad badeeda ka qaataan maraakiibta ay afduubtaan ay dad aad u tira badan qaybsadaan taasi oo dhaqaalaha goobaha ay ka soo jeedaan kobcisay.
Warbixinta ayaa dhanka kale waxa saamaynta lacagta burcad badeed ku tilmaamtay in aytahay qiimaha badecoyinka oo si’aad ah u kordhay islamarkaana sicir bararka uu heer sare gaaray.
British think-tank Chatham House oo ah hay’ada samaysay darasaadka, ayaa soo jeedinaysa in xalka burcad badeeda uu yahay in birriga lagula dagaalamo isla markana dowlada maamul goboleedka Putland qaado talabo kadhan ah arintani, wax badana ay ka qabato.
Marakiibta caalamiga ee kusugan gacanka cadmayd ayaa adkeeyay in ay kooxaha burcad badeeda ay weeraro cusub qaadaan walow ay jiraan afduubyo mararka qaar dhaca, taasi oo lagu tilmaamay inaysan waxii howshoda ahayd qaban ciidanka Nato.
Anja Shortland, January 2012
Source : chathamhouse